जापान आउनुअघि गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने केहि कुराहरु ~ नेसाज ब्लग
हाम्रो देश नेपालमा अब त जो जसरी लडेपनि ‘अन्याय’ को विरुद्ध लडेको भनेको सुन्नु अनौठो कुरा होइन । रातोमाटो, चिप्लो बाटोमा चिप्लिएर लडेतापनि, त्यो पनि अन्यायको विरुद्ध हो । किन भनेर नभन्नु होला, हामी हिड्ने बाटो रातोमाटो त्यसमाथि पनि चिप्लो के यो अन्याय होइन ? मरेको बिरालो काखी च्यापेर ठिमिको उकालो चढ्दा ढुंगामा अल्झेर लड्दा होस् या रोपाईं हिलो छ्पाछ्प् गरेर लड्दा होस्, लडेको त हो नि होइन र ?
जापान ओर्लने बित्तिकै उनीहरुको वास्तविक जीवन सुरु हुन्छ । प्रथमतः भाषा समस्याले कैयौं महिना कोठामै थलिइन्छ। अर्कोतिर कामको समस्या, पढाइ अलपत्र, नेपालमा साहुसँग लिएको चर्को शुल्कको ब्याज, घरपरिवार आदि इत्यादि सोच्दा कमलो मुटु भएकाहरु त डिप्रेसनको शिकारसमेत भएका घटनाहरु छन् । यी मध्य केही प्रतिशतले मात्र आफ्ना उज्ज्वल भविष्य साकार पर्छन भने अधिकांश नेपालमा ब्याज तिर्दै उही कथित् ‘लडाई’ लडिरहेका हुन्छन । सामन्यतया जापानमा भाषा विद्यार्थीहरुको लागि भाषा विद्यालयहरुको वार्षिक अधिकतम शुल्क ६ लाख देखि ७ लाख हो ।
जापान जाने भन्ने बित्तिकै फलिरहेको पैसा टिपेर ल्याउने होइन त्यसको लागि मरिमेटेर दु:ख गर्नुपर्छ भनेर एकपटक निधार खुम्च्याउनुस । अर्को कुरो भाषा विद्यार्थी भनेको जापानको सरकारले कामदार भनेर सोच्दैन, तपाइँले नियमपुर्वक गर्न पाउने काम भनेको हप्तामा २८ घण्टा मात्र हो, त्यो भन्दा बढी समय काम गर्नु भनेको नियमविपरित कार्य हो, जापान सरकारले चाहेको बखत, जतिखेर जुनसुकै बेलामा पनि तपाइँलाई पक्रिएर नेपाल फर्काइदिन सक्छ ।
(लेखक: तोयोहासी बिश्वबिध्यालयबाट पिएचडी)